Archive du 20200507
Soavimasoandro Olona 30 ahiana ho voan’ny Coronavirus
Nilaza ny sefom-pokotany fa efa misy olon-kafa ahiana ho voan’ny coronavirus ankoatran'ireo olona 5 voatily andro vitsy lasa izay, saingy mbola tsy navoakan'ny CCO Covid-19 tamin’ny fomba ofisialy.
Kaominina Antananarivo Renivohitra Mampiaka-peo ireo mpanolon-tsaina TIM
Nantsoina hivory izahay, ary mampihomehy na hamehana aza satria ao anatin’ny 24ora izahay no antsoina hivory.
Gaby Vakiniadiana “Mizotra any amin’ny jadona ny firenena!”
Manjavozavo ary mizotra any amin’ny jadona ny firenena, hoy ny mpanao politika, Gaby Vakiniadiana.
Vehivavy Malagasy any Koweit 200 ireo efa miandry fampodiana
Vehivavy Malagasy miisa 200 niasa tany Koweit no efa miandry ny fampodiana azy eto an-tanindrazana fotsiny amin’izao.
Malagasy Rugby Mamolavolana ireo tetik'asa ho fameranana ny Rugby
Nanomboka mamolavola ireo tetik'asa ho fameranana ny hetsika Rugby eto Madagascar ry zareo ao amin’ny Malagasy Rugby ao aorian’ny fiatrehana ny ady amin’ny tsimokaretina coronavirus.
Atomboy amin’ny Gasy ny famonjena e !
Tsy hampandry saina mihitsy ny zava-misy ankehitriny, fa mampitaintaina andro aman’alina. Miakatra hatrany isan’ireo mitondra ny tsimokaretina.
Taxi be eto Antananarivo Hitohy ny fitsirihana teknika maimaimpoana
Mifandraika indrindra amin’ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana hanalefahana ny fahasahiranan’ireo tompona fiara fitanteram-bahoaka na taxi-be
Taxi be eto Antananarivo Tsisy zavatra tapaka, hiverina hiasa…
Nitohy teny amin’ny Tobin’ny Maki Andohatapenaka ny fivorian' ireo Vondron’ny mpitatitra.
Fanadinam-panjakana BEPC Efa mandeha ny famolavolana ny laza adina
Na dia mbola tsy voafaritra mazava aza ny daty hanatanterahana ny fanadinam-panjakana BEPC noho ny hamehana ara-pahasalamana vokatry ny Covid 19 eto
Fahasalamana Zavadehibe ny fanaovana "Bilan" sy "Controle"
Misy manafangaro matetika ny fanaovana bilan sy ny controle any amin’ny toeram-pitsaboana.
Midongy Atsimo Zaza 4 matin'ny tazomoka
Ny faritra atsimon` ny nosy no tena mizaka ny mafy amin` ny aretina tazomoka. Mandripaka tanteraka izany amin` izao na dia mahavaivay ny aretina Covid-19.
Fanafihana teny Tsiadana Olona teo an-tanàna ihany no nanampy ireo olon-dratsy
Nisy fanafihan-jiolahy mitam-piadiana teny Tsiadana Ankatso ny harivan’ny 06 aprily lasa teo.
Mampaneno lakolosy i Rossy "Tsy faly ny eny ambany tanàna"
Tsy faly ny eny ambany tanàna, misy alahelo. Alahelo tsy hambara havana zakan’ny tompony ihany, hoy ny Depiote Rahasimanana Paul Bert na Rossy tao amina onjam-peo iray omaly.
Mpivarotra ao Morafeno Mahajanga Nirohotra nankeny amin’ny lapan’ny tanàna
Nivadika bazary tao anaty fotoana fohy ny lapan'ny tanànan'ny Mahajanga noho ny fitokonan'ireo mpivarotra nesorina teny amin'ny làlaln’i Morafeno omaly alarobia 6 may maraina.
Fahatapahan-jiro Sady manimba sakafo no manimba fitaovana
Ho an’ireo faritra izay tsy tapaka maraina dia ny hariva no tapaka ny jiro ho an’ireo fokontany eto Antananarivo renivohitra aloha, raha ny tsikaritra hatreto.
Vatsy Tsinjo Tsy mahavita herinandro ho an'ireo maro anaka
Fanampiana tsy natao haharitra ny Vatsy Tsinjo, izay zaraina isam-pokontany tanterahin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny vokatry ny fiparitahan’ny tsimok’aretina coronavirus.
Matsiatra Ambony Tapitra ny fizarana vatsy Tsinjo
Nifarana ny fanomezana ny vatsy Tsinjo tany Matsiatra Ambony ka ny distrika any Lalangiana no nisitraka izany farany.
Mpikarakara lanonana Mangataka ny avela hiasa
Nivondrona nanao fanambarana tetsy 67ha omaly ireo mpikarakara lanonana amin’ireny toerana fandraisana izany ireny na Espace.
Sehatra tsy miankina Mety haharitra 3 taona ny krizy
Mety mbola haharitra hatramin'ny 3 taona ny fiantraikan'ny krizy eo amin'ny lafiny toe-karena indrindra fa ho an'ireo sehatra tsy miankina araka ny nambaran’ ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Richard Randriamandrato.
Covid-19 any Toamasina Hisy fitiliana faobe anio, ho avy any Filoha
Hisy ny fitiliana valanaretina Covid-19 faobe ( Dépistage PCR ) any Toamasina anio 07 mey 2020 eo anoloan’ny Esplanade La Mairie any an-toerana.
Antanimora Voafonja 100 no natao fitiliana
Ho mariky ny fiarahamiasa eo anivon` ny ministeran` ny fahasalamana sy ny fiarovam-pirenena ary ny ministeran`ny fitsarana dia nitohy ny fitiliana atao amin` ireo voafonja eny anivon` ireo fonja manrenana ny nosy.
Ady amin’ny covid-19 Nanolotra fitaovana teny Sabotsy Namehana ny HVM
Arotava 150, Gel Hydroalcoolique 150 ary “eau de javel” 20 litatra no natolotry ny antoko HVM sy ireo loholona avy amin'io antoko io ho an'ny CSBII Sabotsy Namehana omaly 06 Mey 2020.
Covid Organics Miandry fanazavana tekinika feno ny vondrona afrikanina
Miresaka momba ny fanafody hitsaboana ny COVID 19 na ny Covid Organics izay voalaza fa mifototra amin’ny zavamaniry fitsaboana eto Madagasikara ankehitriny ny eo anivon’ny vondrona afrikanina.